दार्जिलिङ आन्दोलन : नेपालमाथि बेनर्जीको आरोप र यथार्थता |
दार्जिलिङ आन्दोलन : नेपालमाथि बेनर्जीको आरोप र यथार्थता
21 June, 2017 | Sandeep Bhattarai | 6025 Views | comments
नेपालको तराई क्षेत्रमा पहिचान र अधिकारका लागि भन्दै मधेशवादी दलहरुले निर्वाचन वहिस्कार गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुको आन्दोलन दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुभन्दा अघिदेखि चलिरहेको छ ।
त्यो आन्दोलनले नेपालमा नाकाबन्दीको स्थिति समेत ल्यायो । मधेशी समुदायको पहिचान र अधिकार सुनिश्चित नगरेको र भेदभाव गरेको भन्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । अहिले त्यही भारतको भूमिमा त्यस्तै आन्दोलन चलिरहेको छ । पश्चिम बंगाल सरकारले व्यापक दमन गरेको छ ।
नेपालका राजनीतिक दलको संलग्नता रहेको आरोप पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीको छ । तर मुख्यमन्त्री वेनर्जीले आन्दोलनमा नेपालका आन्दोलनकारी र आतंकवादी घुसेको आरोप लगाएपछि भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीका नेता अमित साहले ममता जेलाई पनि आतंकवादी देख्छिन् भन्दै आलोचना गरेका छन् । त्यस्तै गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले संवादबाट समस्या समाधान गर्न आव्हान गरेका छन् ।
दार्जिलिङको आन्दोलनमा नेपाली जनताको ठूलो चासो छ । किनभने कुनै समय यो भूमि नेपालको थियो । ग्रेटर नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने दार्जिलिङ कुनै समय नेपाली भूमि थियो । तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीसंगको युद्ध हारेपछि सन् १८१६, मार्च ४ मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धिपछि नेपालले पूर्वको टिष्टापारी र पश्चिममा सतलजपारीको भूमि गुमाएको थियो । अहिले ती भूूमि भारत र केही बंगलादेशमा परेको छ ।
नेपालको तराई र केही पहाडी क्षेत्रमा भाषिक र जातिय पहिचानको आन्दोलन नेपालमा चलिरहेका बेला भारतको पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्र दार्जिलिङ उद्वेलित छ अलग प्रदेश माग्दै । तराईको आन्दोलनमा भारतको साथ र सहयोगका अनेक प्रमाण छन् ।
नेपालसँग सिमाना जोडिएको र नेपालीभाषीको बाहुल्य अनि वीर नेपालीको चिनारी दिने गोर्खा शब्दसंग जोडेर भैरहेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्दैछ, पश्चिम बंगाल सरकारले व्यापक दमन गरेको छ । दार्जिलिङका सडकहरुमा प्यारा मिलिटरी र प्रहरी परिचालन गरिएको छ । टेलिभिजन र इन्टरनेट बन्द गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा तीनजनाको मृत्यु भैसकेको छ ।
सन् १९८८ मा आन्दोलनकारी गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्ट, पश्चिम बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारबीच भएको त्रिपक्षीय सहमतिपछि स्वायत्त पर्वतीय परिषद् अवधारणा कार्यान्वयन भए पनि यता आएर गोर्खाल्यान्ड राज्यको लागि संघर्ष चर्किएको छ । यसको कारण भने पश्चिम बंगाल सरकारले नेपालीभाषी क्षेत्रका स्कुलहरूमा समेत बंगाली अनिवार्य गर्ने निर्णय गर्नु हो । यो आन्दोलन अब अलग प्रदेशको मागमा पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री बनर्जीले दार्जिलिङका आन्दोलनकारी पक्षको नेपालका कुनै संगठित समूहसँग साँठगाँठ रहेको आरोपसमेत लगाएकी छिन् । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने यसअघिको आन्दोलनमा माओवादी घूसपैठ भएको आरोप भारतीय पक्षबाट लगाइएको थियो ।
हुन पनि नेपालको तराई क्षेत्रमा हुने आन्दोलनमा भारतीय घूसपैठिया आउने गरेको प्रमाण एक होइन अनेक छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला वीरगञ्जमा धर्ना बस्न आएका भारतीय मारिएका थिए । भारतले त्यही आधारमा नेपालको संलग्नताको आरोप लगाएको हो ।
तर दार्जिलिङको सीमा क्षेत्रमा नेपालबाट गएका छैनन् । यति गम्भीर आरोप लगाइरहँदा नेपाल सरकारले भारतबाट आधिकारिक तथा प्रमाणजन्य विवरण माग्नु उचित हुनेछ ।
भारतले किन दार्जिलिङको आन्दोलनमा नेपाललाई मुछ्ने गरेको हो यो निकै पेचिलो विषय हो । किनभने यो कुनै समयमा नेपालको भूमि थियो र अहिले पनि त्यहाँ झण्डा, मुद्रा र सुरक्षा संयन्त्र बाहेक, भाषा, संस्कृति, धर्म, संस्कार सबै नेपाली छ । त्यसैले आन्दोेलन कमजोर पार्न नेपालको घूसपैठको आरोप लगाउँदै दमन गरिन्छ ।
के भारत तराईका आन्दोलनकारीहरुलाई उकास्ने र थचार्ने काम बन्द गर्न तयार छ ? भारतले तराईमा गरेजस्तै नेपालले पनि दार्जिलिङको आन्दोलनलाई समर्थन गरे भोलिको दिन कस्तो होला ?
नेपालमा भाषिक र पहिचानको अधिकार दिनुपर्छ भनेर दवाव दिने भारतले आफ्नै देशमा त्यो दिन किन चाहँदैन । किन नरसंहार गरिरहेको छ ? नेपालका राजनीतिक दलहरु किन बोल्दैनन् । त्यहाँको आदोलनमा नेपालको संलग्नता रहेको आरोप मुख्यमन्त्रीले लगाएपछि बोल्नुपर्ने दायित्व कसको हो ?
भारतले भनेजस्तै संलग्नता नभए पनि दार्जिलिङप्रति नेपाल र नेपालीको विशेष सहानुभूति छ किनभने सो क्षेत्र नेपाली भाषा, संस्कृतिले भरिपूर्ण क्षेत्र हो । नेपाली गीत, संगीतमा दार्जिलिङको विशेष योगदान छ । नेपालभित्रै नेपाली भाषा र भेषभुषा कमजोर बनाउने प्रयास भैरहँदा त्यहाँ नेपाली भाषा र भेषभुषाले सडक नै रंगीन बनाउँदै प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
नेपाल र नेपालीको चासो नेपालीपनको हो । नेपाल त्यहाँको समस्या वार्ताको माध्यमबाट समाधान होस् भन्ने चाहन्छ । नेपालको यो सदासयता भारतले बुझ्नु जरुरी छ । के भारत तराईका आन्दोलनकारीहरुलाई उकास्ने र थचार्ने काम बन्द गर्न तयार छ ? भारतले तराईमा गरेजस्तै नेपालले पनि दार्जिलिङको आन्दोलनलाई समर्थन गरे भोलिको दिन कस्तो होला ?
नेपाललाई अहिले आफ्नै घरभित्र (तराई)को झगडा मिलाउने चटारो छ । जुन आन्दोलनमा भारतको उच्च चासो रहेको छ । भारतीय मूलका मधेशीहरुलाई अधिकार दिइएन भनेर भारतबाट भैरहेको जस्तो वक्तव्यवाजी नेपालले नेपाली भाषाहरुमाथि भारतले दमन गर्यो भनेर गरेको छैन/ गर्ने पनि छैन । नेपाल र नेपाली जनताको गहिरो सहानुभूति र समर्थन दार्जिलिङबासीको आन्दोलनमा छ । अधिकारको लडाइँमा विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि सद्भाव मिल्छ । अझ दार्जिलिङ त नेपाली भाषीहरुको बाहुल्य रहेको क्षेत्र ।
तर, पनि बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीलाई भन्नैपर्छ हामी भारत जस्तो अरुको मामिलामा हस्तक्षेप गर्दैैनौं र सिमा काटेर अरुको भूमिमा ढुंगा हान्न जाने संस्कृति हाम्रो छैन । आफ्नो कुर्सी जोगाउन निकटतम छिमेकीलाई दोषारोपण गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्छ ।
#दार्जिलिङ आन्दोलन : नेपालमाथि बेनर्जीको आरोप र यथार्थता